MTJIBS MAHAZO FITEHIRIZAM-BOKIN'NY APOSTOLY AZO ATAON'NY AGITO | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » MTJIBS MAHAZO FITEHIRIZAM-BOKIN'NY APOSTOLY AZO ATAON'NY SITITAN'ASA
Orinasa mpanohana fakantsary miorina ao Fort Lauderdale dia mitantana ny halavirana ara-tsosialy sy ny kanto amin'ny fomba
Nandritra ny roa taona lasa izay, Michael Taylor, tompon'ny MTJIBS - orinasa mpanohana fakan-tsary ao Fort Lauderdale, Florida, dia naniry ny hanitatra ny firaketan'ireo orinasa vahaolana izay azon'izy ireo atolotra ny mpanjifany. Saingy nandritra izany fotoana izany dia tsy afaka izy tadiavo ny rafitra mety hampiasa vola izay mifanaraka amin'ny takian'ny indostria. Avy eo dia hitany ny rafitra Mly Impossible AGITO modely dolly.
"Izaho dia nitady fotsiny Dolly miasa izay azo itokisana amin'ny seho mivantana," hoy i Taylor manazava. “Avy eo hitako ny AGITO niasa ary tena talanjona aho. AGITO dia nanolotra fahaiza-manao na amin'ny lalana na amin'ny làlan-kaleha - afaka nanao izay rehetra nilaina natao sy bebe kokoa… tsy misy tariby. Azontsika izany. ”
AGITO no maodely voalohany eran'izao tontolo izao lavitra dolly. fahae AGITO dia manasongadina lamina maro, mamela ny fivezivezena milamina avy amin'ny fihetsiketsehana dolly miadana sy mandeha haingana mankany amin'ny fivezivezena haingam-pandeha haingam-pandeha, ao anatin'ny vahaolana iray azo alefa tanteraka. Miaraka amin'ny fanovana tena tsotra sy haingana an'ny fiara mifarana, ny AGITO dia azo alamina ho an'ny fandehanana maimaimpoana maimaim-poana amin'ny maody Sports, na ny fivezivezena marina amin'ny làlambe amin'ny maody Trax. Taylor dia nahazo rafitra AGITO COMPLETE tamin'ny farany, izay manome ho an'ny fampiasana lalamby nentim-paharazana sy ny fampiasana terrain multi-terrain, miaraka amin'ny AGITO Tower izay manome ny rafitra 700mm fiakarana.
"Mazava ho azy, raha vantany vao naharay ny AGITO izahay, dia nanomboka ny fanidiana ny areti-mandringana, saingy tombony ho antsika izany satria tsy misy tariby ilay rafitra ary manome ny halaviran'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny famolavolana," hoy i Taylor. “Tsapanay fa nanao ny fividianana tonga lafatra izahay.” Miaraka amin'i Xavier Mercado, manam-pahaizana momba ny fihetsiketsehana ary mpikirakira ny MTJIBS dia nanomboka nampiroborobo ny rafitra ny orinasa.
Ny asa voalohany ho an'ny rafitra modely modely vaovao an'ny MTJIBS dia ho an'ny NASA sy ny fanombohana ny SpaceX Crew Dragon Demo-30 tamin'ny Space May 2 - sidina fanandramana ekipa voalohany an'ny sambon-danitra Crew Dragon ary mpandeha habakabaka orbital voalohany natomboka avy tany Etazonia hatramin'ny nanatontosana ny famaranana farany. Misiona Space Shuttle, STS-135, tamin'ny 2011. Ny asa dia tonga tamin'ny alàlan'ny referansa avy amin'ny Motion Impossible taorian'ny nifandraisan'ny orinasa NASA, satria ny MTJIBS dia 200 kilaometatra miala ny Kennedy Space Center. Ny MTJIBS dia tompon'andraikitra amin'ny fakana ny fotoana nentim-paharazan'ireo ekipa niditra tao anaty fiaran'ny fitaterana rehefa avy nivoaka ny Neil Armstrong Operations and Checkout Building (fantatra amin'ny anarana hoe Manned Spacecraft Operations Building) ary naka sary. Ny fivoahana sy ny fidirana amin'ireo fiara fitaterana dia tifitra fantatra manerana an'izao tontolo izao, mandany ny vanim-potoana Gemini, Apollo, Skylab, ary Space Shuttle. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity, NASA dia te hanao zavatra mavitrika kokoa noho ny vilany fakantsary mahazatra.
(Hita eto ny tifitra www.youtube.com/watch?v=vAtCOwgSiEo)
Raha ny fanazavan'i Mercado dia ny rafitra AGITO no ampahany haingana indrindra amin'ny fitaovan'izy ireo. “Nifarana ny fivorian'ny fiara, ny tilikambo ary ny tariby dia haingana dia haingana avokoa. Ny rafitra fanaraha-maso tsy misy tariby dia niasa tsara ary natanjaka nandritra ny fotoana rehetra. ” Na dia olona iray aza ny AGITO, i Taylor sy i Mercado dia samy niasa tamin'ny rafitra niaraka tamin'i Taylor nitazona ny lohan'ny fakantsary sy i Mercado nitazona ny AGITO. "Amin'ny olona roa, mandeha tsara ny fandidiana, fa ny AGITO dia milamina ihany koa rehefa olona iray mampiasa pedal tongotra", hoy i Mercado.
Ny hetsika manaraka an'ny MTJIBS dia karazana fandaharana isan-karazany. Na dia efa nanolotra serivisy ho an'ny Telemundo sy ny Univision nandritra ny 20 taona aza ny orinasa, ny programa tsirairay dia mitaky ny MTJIBS manome tolo-kevitra ho an'ny serivisiny satria ny mpamokatra dia mitady fomba famoronana hatrany hisamborana ny fampisehoana ataon'izy ireo.
Anisan'izany ny Billboard Latin Music Awards 2020 ho an'i Telemundo sy ny Loka faha-21 GRAMMY® latina isan-taona ary Tanora loka (Loka ho an'ny tanora) 2020 ho an'ny Univision.
"Tanora loka tena nahomby tokoa rehefa nifanambady tamin'ny AGITO izahay tamin'ny alàlan'ny gimbal SHOTOVER G1 izay miorina tsara gyro, "hoy i Taylor. "Saingy ny AGITO irery dia milamina kokoa noho ny rafitra hafa, na dia tsy misy loha milamina aza. Tena tian'ireo mpitantana ny AGITO satria manome azy ireo fahaiza-mamorona be dia be miaraka amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Ny talen'ny iray aza dia namaritra ny rafitra ho 'kintan'ny fampisehoana' satria izy io koa no nampiasaina ho fakantsary lehibe, ary nahafaly tokoa ny naheno. ”
"Mihamamorona kokoa ny talen'ny talen'ny COVID-19," hoy i Mercado. "Ny seta vaovao rehetra dia noforonina miaraka amin'ny tanjona hiarovana ny talenta sy ny mpanakanto, saingy tokony ho fampisehoana mampientam-po sy hita maso izany."
Ho an'ny famokarana Telemundo ny Billboard Latin Music Awards 2020, ny sety dia namboarina tamina dingana efatra amin'ny endrika arena, miaraka amin'ny mpanolotra eo afovoan'ny dingana, hoy i Mercado. "Ny AGITO dia tonga lafatra tamin'ity famolavolana boribory ity. Izy io dia afaka mandray anjara amin'ny tifitra isaky ny sehatra ary mihodina ho an'ny mpanolotra mandritra ny fotoana hitazomana ny halaviran'ny vatana. Tena nandray anjara tamin'ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny seho izany. ”
"Rehefa mahomby ny tompon'ny AGITO dia mahomby isika," hoy i Rob Drewett, CEO sy mpiara-manorina ny Motion Impossible. Ny fahafahana miantso ny MTJIBS amin'i NASA ary mahita ny fomba nampiasan'izy ireo ny AGITO hanampiana ireo zavaboary hamorona bebe kokoa dia izany no antony namoronantsika ny rafitra. Tery sy fohy kokoa noho ny dolly nentim-paharazana izy ary mamonjy fihetsiketsehana izay mety tsy ho vitanao hatrizay. ”
Vao tsy ela akory izay, ny MTJIBS dia nahita xR - Extended Reality, fitambaran'ny Augmented sy Mixed Reality - asa famokarana mozika.
Tsy hitan'i Taylor miverina amin'ny fomba mialoha ny areti-mandringana ny famokarana. “Nianatra teknika vaovao tamin'ny teknolojia vaovao izahay. Anisan'ny antony nividianantsika ny AGITO voalohany. Handeha amin'izay ihany ny zava-drehetra ary efa niomana amin'ny ho avy izahay. ”
"Tianay izay miandry ny AGITO," hoy i Mercado. Motion Impossible dia mandroso hatrany ny teknolojia vaovao amin'ny ho avy. Ary ho anay dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasanay ny AGITO ary manokatra tsena vaovao. ”
Previous: Seminera Manolotra Fanadihadiana momba ny fampifanarahana ny fampianarana mozika ho an'ny COVID miaraka amin'i Dante mandritra ny NAMM 2021
Next: Goldcrest Post dia nanampy an'i Alex Berman, mpandoko ny loko veteran